एमसिसी ऊर्जा विकासमा ‘कालो बादल’ - UrjaKhabar एमसिसी ऊर्जा विकासमा ‘कालो बादल’ - UrjaKhabar
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अन्तर्गत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस सहयोगबारे हाल चलिरहेको चर्को सार्वजनिक बहस देशको सार्वभौमिकता र भू–राजनीतिमा पर्न सक्ने प्रभावमा सीमित छ । छिट्टै कुनै निर्णायक टुंगो लाग्ला जस्तो देखिँदैन ।
एमसिसी बहस यी विषयहरूमा मात्र संकुचित हुनु हुँदैन । प्रस्तावित सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण प्राविधिक, सामाजिक र आर्थिक पक्षहरू छन् । यसको बहसमा भइरहेको विवादलाई यी ३ पक्षमा हेर्न सकिन्छ । देश विकासको २ फरक दीर्घकालीन दूरदृष्टिको विकल्पबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ । यहाँ दूरदृष्टिको प्रतिस्पर्धालाई ३ उपशीर्षकमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
आयात कि नेपालको जलविद्युत् ?
नेपाली उपभोक्तालाई २ स्रोतबाट बिजुली उपभोग गर्ने विकल्प छ, भारतबाट आयात या देशकै जलविद्युत् । एमसिसीको ४ पूर्वसर्त मध्ये एकमा नेपालले बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । नेपाल खण्ड भने एमसिसीले निर्माण गरिदिने उल्लेख छ ।
यो पूर्वसर्त अनुसार भारतसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौता अनुसार भारतले आफ्नो सीमाभित्रको लाइन आफैं निर्माण गर्र्र्छ तर त्यसको पूरै खर्च नेपालले बेहोनुपर्ने हुन्छ । यो लाइनले देशको विद्युत् क्षेत्रलाई भारतीय बजारसँग एकीकृत गरिदिन्छ । यस्तो बजारको प्रतिस्पर्धाले देशमा ठूला जलविद्युत् परियोजना नबन्ने जोखिम बढाइदिएको छ ।
भारतमा नेपालभन्दा सस्तोमा बिजुली उत्पादन हुन्छ । हालै त्यहाँ सुरु भएको स्वदेशी कोइलाको नयाँ युगले भारतमा बिजुली उत्पादनको लागत अझै घटने सम्भावना छ । यहाँ बन्नुपर्ने हजारौं मेगावाटका नयाँ जलविद्युत् आयोजना भारतको सस्तो बिजुलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसो हुँदा ती विस्तापित हुने देखिन्छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न सम्भव रहँदैन ।
बिजुलीको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन भारतीय बजार प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारको तर्क छ । त्यो भनेको बिजुली उत्पादनभन्दा माग धेरै भएको बेला (हिउँदमा) भारतबाट आयात गर्ने र अधिक भएको बेला (बर्खामा) निर्यात गर्ने हो ।
देशमा धेरै नयाँ जलविद्युत् आयोजना बनाउन अझै बाँकी छ । यस्तो सन्दर्भमा अवसरवादी मौसमी बिजुली व्यापरको रणनीति उपयुक्त हुँदैन । यहाँ हजारौं मेगावाट उत्पादन भइसकेको भए यस्तो रणनीति उपयुक्त हुन्थ्यो होला । तर, त्यो अवस्था होइन । बल्ल त जलविद्युत् विकासको युग सुरु हुँदैछ ।
भारतीय व्यापारीले नेपालको अवसरवादी (मौसमी) बिजुलीसँग मूल्य र मात्रा निश्चित भएको दीर्घकालीन खरिद सम्झौता गर्न मान्दैनन् । तर, व्यापारिक मर्चेन्ट (दीर्घकालीन अवधिका लागि खरिद मूल्य र मात्रा निश्चित नभएको) बिजुली खरिद सम्झौताका आधारमा यहाँ कुनै पनि आयोजनाले लगानी जुटाउन सक्दैनन् ।
सरकारको भारतसँगको बिजुली नीति यस्तै व्यापारिक सझौतामा आधारित छ । एमसिसी अन्तर्गत बनाउन लागेको सीमापार प्रसारण लाइनले देशको जलविद्युत् विकासलाई कुनै टेवा दिन सक्दैन । उल्टै घातक हुन जान्छ ।
विद्युत् सरकारको एकाधिकार वा साझा ?
सरकारले एमसिसी अनुदानबाट निर्माण गर्न लागेको सीमापार प्रसारण लाइनले देशको विद्युत् क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अप्रिय बनाइदिन्छ । ठूला आयोजनाबाट व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता पछाडि हट्छन् ।
व्यावसायिक र व्यापारिक रूपमा लाभ नभएको क्षेत्रमा एक निकायले मात्र लगानी गर्न सक्छ, त्यो हो सरकार । यसमा सरकारको भूमिका बेतोडले बढ्छ । यसै पनि यस क्षेत्रमाथि बढिरहेको सरकारको औपचारिक र व्यवहारिक एकाधिकार अब पूरै उसको कब्जामा हुन्छ । अब सरकारले आयोजना आफैं छनोट गर्छ । त्यसको विकास, निर्माण, व्यवस्थापन, लगानी र सञ्चालन आफैं गर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिका केही रह्यो भने ठेकेदार सरह रहन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ३ बेग्ला–बेग्लै (उत्पादन, प्रसारण, वितरण) संस्थानमा विभाजित गरे पनि के फरक पर्छ ? आखिर प्राधिकरणको पुँजी र व्यवस्तापन सरकारकै स्वामित्वमा त रहन्छ ।
सरकारले हजारौं मेगावाटका उत्पादन तथा निर्यात गरेर आर्थिक बृद्धि र विकास गर्ने सपना बाँडेको छ । तर, व्यावसायिक लगानीकर्ता पछाडि हटेपछि सरकारले कहिँ न कहिँबाट जसरी भए पनि लगानी जुटाउने प्रयास गर्नेछ । आर्थिक लाभ नभएका आयोजनाका लागि कसले लगानी दिन्छ ? केवल सरकारले ! भारत, चीन, अमेरिका र अन्य राष्ट्रका सरकारहरूले !
सरकारलाई यसै पनि देशको भू–राजनीतिक चुनौती सम्हाल्न मुश्किल परिरहेको छ । अब ऊर्जाको पक्षबाट पनि यी समस्याहरू अझ गम्भीर हुने सम्भावना बढ्छ । भू–राजनीतिको दबाब र प्रभावबाट जोगिएर बस्न विद्युत् क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको विकल्प छैन ।
विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रका व्यावसायिक लगानीकर्तालाई सहभागी नगराएसम्म यो क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । सरकारको बढ्दो एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रका व्यावसायिक लगानीकर्तालाई सहभागी हुन दिनुपर्छ ।
यो हुनको लागी, सर्वप्रथम नेपालको विद्युत् क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा लाभदायक हुनु पर्छ । तर, सरकारले एमसीसीको अनुदान प्रयोग गरेर बनाउन लागेको योजनाले नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा लाभदायक हुन दिँदैन, जस्ले गर्दा हामी विद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं ।
अनुदान वा व्यावसायिक लगानी ?
सरकार र एमसिसीले गरेको अध्ययन अनुसार प्रस्तावित आयोजना वित्तीयरूपमा अत्यन्त लाभदायक छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक आन्तरिक प्रतिफल दर ४० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापन आन्तरिक प्रतिफल दर ३४ प्रतिशत । यस्तो लाभदायक उच्च प्रतिफलका आयोजनामा अनुदान किन चाहियो ? हामी किन व्यावसायिक लगानी खोज्न सक्दैनौं ?
सरकार र सरोकारवालाले अनुदान किन चाहियो भन्ने प्रश्नका दुई प्रमुख जवाफ दिएका छन् ।
१. भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक कुप्रथा जस्ता विकृतिले गर्दा सरकारको भौतिक पूर्वधार आयोजना सधैं असफल रहन्छन् । र, एमसिसी संरचनाले यस्तो विकृतिबाट जोगाएर तोकिएको ५ वर्षभित्र सफलतापूर्वक कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ ।
२. एमसिसीले प्रदान गर्न लागेको रकम अनुदान हो । न ब्याज तिर्नुपर्छ, न साँवा फर्काउनुपर्छ । यी अनुदानका तर्क स्वीकार्ने हो भने हामी दाताबाट सञ्चालित परम्परागत विकासको मोडलमा स्थगित रहन्छौ ।
समय बदलिइसकेको छ । नागरिकहरूले आफ्नै परिश्रम र क्षमताबाट ल्याएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन तथा सम्भावनाको पहिचान गरेर उनीहरूकै हातमा विकास सुम्पिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
सरकारलाई सही ढंगले काम गराउन जनताले मात्र सक्छन् । दाताको अनुदान, प्रेम, दया या विकासको चाहनाले हुदैन ।
आयोजनामा सधैं बाधक हुने । भ्रष्टचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक कुप्रवद्र्धन जस्ता विकृति रोक्ने हामी सबैको काम हो । कुनै दाता निकायको होइन । सरकारलाई सही ढंगले काम गराउन जनताले मात्र सक्छन् । दाताको अनुदान, प्रेम, दया या विकासको चाहनाले हुदैन ।
एमसिसी अन्तर्गतका आन्तरिक प्रसारण लाइनमा अनुदान प्रयोग भयो भने यहाँका लगानी अवसरमा अत्यन्तै खराब सन्देश जान्छ । व्यावसायिक लगानीकर्ता भैतिक पूर्वाधार आयोजनामा सधैं चासो राख्छन् । त्यसमाथि प्रसारण लाइनमा त झनै आकर्षित हुन्छन् । यसमा जोखिम न्यून हुन्छ । दीर्घकालीन आम्दानी आउँछ । बजारको प्रतिस्पर्धा हुँदैन ।
यो परियोजनामा व्यावसायिक लगानी जुटाएर आर्थिक सम्भावना झल्काउने एक उदाहरण बन्न सक्छ । अनुदान प्रयोगले यसको विपरित सन्देश जान्छ, नेपाल व्यावसायिक लगानीका लागि तयार छैन भन्ने । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा सरकार र दाता बाहेक अरू कसैले नेपालको ठूला आयोजनामा लगानी गर्न मिल्दैन भन्ने बुझिन्छ ।
एमसिसीमा प्रस्तावित आन्तरिक प्रसारण लाइन नेपालीले आफैं निर्माण गर्नुपर्छ । लगानी जुटाएर, चाहिने विशेषज्ञताको स्रोत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारमुक्त संरचना खडा गरेर, सरकारलाई उत्तरदायी बनाएर काम गर्न सकिन्छ । ५ वर्षभित्र सफलतापूर्वक निर्माण सम्पन्न गरेर परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यही नै हाम्रो उर्जा भविष्य हो ।
थापा, ऊर्जाविज्ञ हुन् ।